#EFFTurns4: Iqembu lithembisa ubumnandi emgubhweni walo | News24
#EFFTurns4: Iqembu lithembisa ubumnandi emgubhweni walo
Durban - Iqembu lezepolitiki i-Economic Freedom Fighters (EFF) livakashele eCurries Fountain Stadium liyoqapha amalungiselelo omgubho walo njengoba lihlanganisa iminyaka emine lasungulwa, ngoLwesihlanu.
Leli qembu, lizobe linomcimbi omkhulu ozoqala ngezithuba zabo-10:00 ekuseni ngoMgqibelo kanti alithembisi okuningi ngaphandle kokuhle kodwa kulabo abazobe bewuhambele.
"Sizokwenza ezibukwayo kusasa," kusho uGodrich Gardee we-EFF.
OLUNYE UDABA:UMalema uzovakasha eKZN ngaphambi komgubho weqembu esifundazweni
UGardee uthe bawulungiselele kahle lo mcimbi. Uphinde wathi sebenamalungu amasha kodwa amagama awo angakazukudalulwa okwamanje.
UGardee uthe lo mcimbi uzobe umkhulu futhi i-EFF izophinde ivakashele ezinye izindawo zaseNingizimu Afrika njengengxenye yomgubho wayo.
UMbuyise Ndlozi okhulumela i-EFF, uthe "kuzobe kunenqwaba yabaculi abazobe benandisa".
UJulius Malema, onguholi weqembu, kulindeleke ukuba ethule inkulumo ngabo-13:00.